railway Archives | တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: ရထားလမ်း
နေအိမ် > ရထားလမ်း
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ နေ့တိုင်းကရထားလမ်းကို အသုံးပြု. ခရီးသည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကြည့်ဖို့ဘုံမျက်မှောက်ဖြစ်ပါသည်. ထို့ကြောင့်, ဒါကြောင့်အံ့ဩစရာမရှိဖြစ်ပါတယ်, အဆိုပါရထားလမ်းတိုင်းပြည်၏အသက်သွေးကြောအဖြစ်လူသိများကြသည်. မပါဘဲ, which they can be immense chaos and it can lead to confusion and…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ သားစဉ်မြေးဆက်အဘို့အယင်း၏လူမှုရေးသမိုင်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည့်တစ်ဦးအပေါများရထားလမ်းကွန်ယက်ကိုအားဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဗြိတိန်ရဲ့. တဖန်သင်တို့တစ်ရထားလမ်းဝါသနာအိုးဆိုရင်, တစ်ဦးကိုဗြိတိန်ရထားလမ်းအားလပ်ရက်နေရာများမှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်လှုပ်ရှားမှုများ Penzance မှ Aberdeen ကနေလမ်းအပေါင်းတို့နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်. သင်၏နှလုံးရဲ့ set ကိုလျှင်…